Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamanka iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Baledweyne – Radio Muqdisho
Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamanka iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray Baledweyne
Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad iyo wafdi uu hogaaminayo oo uu ka midyahay Wasiirka Amniga gudaha C/risaaq Cumar iyo mas’uuliyiin kale ayaa gaaray magaalada Beledweyne.
Xubnahan ayaa lagu soo dhaweeyay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Baledweyne Ugaas Khaliif, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan iyo Saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo kuwa AMISOM.
Ujeedada Wafdigaan ay u tageen Magaalada Baledweyne ayaa waxa ay tahay sidii maalinta beri ah ay uga qaybgeli lahaayeen Caleemo saarka Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo beri lagu caleemo saarayo Magaaladaasi.
Xildhibaano ka tirsan Dowladda ayaa horay ugu sugnaa Magaalada Baledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan, kuwaasi oo iyagana u tagay halkaa ka qaybgalka Caleemo Saarka Ugaaska.
Ammaanka Magaalada Baledweyne ayaa si weyn loo adkeeyay , gaar ahaan Xarunta Maamulka oo ay ku sugan yihiin masuuliyiinta maanta gaartay Baledweyne.
Garoonka diyaaradaha Cadan oo dib u howlbilaabay